ကလေးများအခမဲ့စားအဘယ်မှာရှိစိန့်လူးဝစ် Area စားသောက်ဆိုင်များ
ယူနိုက်တက်စတိတ် မစ်ဆူရီ စိန့်လူးဝစ်
by ဒါဝိဒ်သည် O 'Brien
အထဲကညစာစားမိသားစုတစ်စုလုံးအတူတကွအစာစားခံစားနေသည်အထူးသဖြင့်အခါ, စျေးကြီးရှိနိုင်ပါသည်။ ကယ်ဖို့တစ်ခုမှာအကြီးအလမ်းလေးတွေအခမဲ့စားနိုင်တဲ့စားသောက်ဆိုင်ရွေးချယ်ရာတွင်ဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ဤတွင်အခမဲ့လေးတွေအစားအစာများကိုပူဇော်သည်ဟုစိန့်လူးဝစ်ဧရိယာစားသောက်ဆိုင်ဖြစ်ကြသည်။
ဒေသခံစားသောက်ဆိုင်မှာပိုက်ဆံကယ်ဖို့ကပိုနည်းလမ်းတွေအဘို့, ထုတ်စစ်ဆေး ဝက်စျေးနှုန်းစိန့်လူးဝစ်စားသောက်ဆိုင်မှာညစာစား ,
ဒေဗောရ O 'Brien တို့ကဓာတ်ပုံ
မှာနိုင်ငံစားသောက်ဆိုင် Eckert ရဲ့သစ်သီးခြံတွေ Belleville အတွက်ဝယ်ယူတစ်ခုချင်းစီကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူမုန့်ညက်မှုအတွက်ကြာသပတေးနေ့ကအခမဲ့လေးတွေအစားအစာများပေးထားပါတယ်။ ကလေးတွေကိုအဘို့အ Options ကိုကြော်ကြက်သား, ကြက်သားတင်ဒါ, ခေါက်ဆွဲ, ပီဇာနဲ့ပူခွေးပါဝင်သည်။ Eckert ရဲ့ Belleville အတွက် 951 တောင် Greenmount လမ်းမကြီးမှာတည်ရှိပါတယ်။
12 ဒေသဆိုင်ရာ Culpeppers နေရာများမှာတနင်္လာနေ့အခမဲ့ကိုစားခြင်းထက်ကလေးတွေကအငယ်: ဗဟို West End အတွက်စိန့်ချားလ်စ်နှင့် 300 မြောက် Euclid အတွက် 3010 အနောက်ရွှံ့စေး။ သား၏အ menu ကိုကြက်သား strips တွေ, ပူခွေး, ဘာဂါ, toasted ravioli နှင့်ပီဇာတို့ပါဝင်သည်။
ကလေးတွေက 12 နဲ့အငယ်တစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူ entree များ၏ဝယ်ယူနှင့်အတူအင်္ဂါနေ့အပေါ်အခမဲ့ကိုစားကြလော့။ သား၏အ menu ကိုကင်ဒိန်ခဲ, ဘာဂါ, ဒိန်ခဲ quesadilla, ပီဇာနှင့်ကြက်သား w ings ပါဝင်သည်။ Krieger ရဲ့ Chesterfield အတွက် 1684 သူမရဲ့ပထမဆုံးအယ်လ်ဘမ်လမ်းမကြီးမှာတည်ရှိပါတယ်။
ကလေးတွေက 12 နဲ့အငယ်တစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူ entree များ၏ဝယ်ယူနှင့်အတူတနင်္ဂနွေအခမဲ့ကိုစားကြလော့။ သားသမီးရဲ့ menu ကိုရှေးခယျြစရာ spaghetti, ခေါက်ဆွဲ Alfredo, ravioli နှင့်ပီဇာတို့ပါဝင်သည်။ စိန့်လူးဝစ္စဧရိယာ၌တစ်ဒါဇင်ကျော်ခေါက်ဆွဲအိမ်နေရာများရှိပါသည်။ သငျသညျအနီးစားသောက်ဆိုင်ကိုရှာဖွေရန်, တည်နေရာ Finder စစ်ဆေးပါ။
Malone ရဲ့ကင် & အရက်ဆိုင်
ကလေးတွေက 12 နဲ့အငယ်တစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူ entree များ၏ဝယ်ယူနှင့်အတူအင်္ဂါနေ့အပေါ်အခမဲ့ကိုစားကြလော့။ သားသမီးရဲ့ menu ကိုရှေးခယျြစရာဘာဂါ, ကရိုနီရောင် & ဒိန်ခဲ, ကြက်သား strips တွေ toasted ravioli ပါဝင်သည်။ Malone ရဲ့ Crestwood အတွက် 8742 Watson ဟာလမ်းမကြီးမှာတည်ရှိပါတယ်။
ကလေးများစိန့်လူးဝစ်နှင့်မီထရိုအရှေ့ဒေသခံကင်ဎ Shake စားသောက်ဆိုင်များစွာမှာစနေနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေအခမဲ့ကိုစားကြလော့။ ဖောက်သည်များသုံးစွဲသည်ကို $ 8 အဘို့တယောက်အခမဲ့လေးတွေမုန့်ညက်ရ။
Fortel ရဲ့ပီဇာ Den
ဒါဟာပေါ်ပြူလာပီဇာစားသောက်ဆိုင်သုံးစွဲတိုင်း $ 10 အင်္ဂါနေ့အပေါ်အခမဲ့ဆိရဲ့အစားအသောက်ပေးထားပါတယ်။ Options ကိုပီဇာ, ခေါက်ဆွဲနှင့်အသားညှပ်ပေါင်ပါဝင်သည်။ Fortel ရဲ့ Affton, Ballwin, Creve Coeur, Fairview Heights, Kirkwood နှင့် University စီးတီးရှိနေရာများတွင်ရှိပါတယ်။
လူကြီး entree များ၏ဝယ်ယူရှိသူများ 12 နဲ့အငယ်အဘို့အနင်္ဂနွေနေ့အပေါ်အခမဲ့လေးတွေမုန့်ညက်။ Options ကိုတစ်လိပ်နှင့်တစ်ဘက်နှင့်အတူကြက်သားအခဲတစ်ခုကလေးတွေသားညှပ်ပေါင်မုဒါမှမဟုတ်ကလေးတွေပန်းကန်များပါဝင်သည်။ Dickey ရဲ့ Brentwood အတွက် 1912 တောင်ပိုင်း Brentwood Boulevard မှာတည်ရှိပါတယ်။
မက်စ် & Erma ရဲ့
ကလေးများနှင့်လူကြီးမုန့်ညက်ဝယ်ယူနှင့်အတူအင်္ဂါနေ့အပေါ်မက် & Erma ရဲ့အခမဲ့ကိုစားကြလော့။ သားသမီးရဲ့ menu ကိုပစ္စည်းများကို cheeseburger လျှော, mini ကိုပြောင်းဖူးခွေးနှင့်ဒိန်ခဲပီဇာတို့ပါဝင်သည်။ ရေကန်စိန့်လူးဝစ် 10 Meadows စက်ဝိုင်း Drive ကိုနှင့် St. Peters အတွက် 2024 အလယ်အလတ်မြစ်ချောင်းများ Mall က Drive ကို: max & Erma ရဲ့နှစ်ခုစိန့်လူးဝစ်နေရာများတွင်ရှိပါတယ်။
Applebee ရဲ့လူကြီး entree များ၏ဝယ်ယူနှင့်အတူအင်္ဂါနေ့ညတွေမှာအခမဲ့ဆိရဲ့အစားအသောက်ပေးထားပါတယ်။ Options ကိုဘာဂါ, ပြောင်းဖူးခွေး, ကင်ဒိန်ခဲနှင့်ကြက်သားတင်ဒါများပါဝင်သည်။ Applebee ရဲ့စိန့်လူးဝစ်ဧရိယာ၌တစ်ဒါဇင်ကျော်တည်နေရာရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Lemp Mansion: စိန့်လူးဝစ် '' အများစုမှာသရဲခြောက်သောကံကြမ္မာ?
Webster Grove အဝန်းနေ့ရက်များ
စိန့်လူးဝစ်အတွက်အောက်တိုဘာလထဲမှာလုပ်ပါမှအသက် 19 အရာ
စိန့်လူးဝစ္စဧရိယာအတွင်းရှိရွှေဖရုံသီး Patch ကို
စိန့်လူးဝစ္စတိရစ္ဆာန်ရုံမှာတောတွင်း Boogie ဂီတပွဲ
လမ်းခရီးစဉ်? ဤသည် App ကိုသင့်ရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကိုသင်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ဖော်ပြပေး
Denver အတွက်ထိပ်တန်းငါးခု Ice Cream အရောင်းဆိုင်များ
သင်ကလေယာဉ်နျ့ကွာမညျဆိုလြှငျထိုပယ်ဖျက်မှုများကိုင်တွယ်ရန်ပါသလားနိုင်သလား 12 အရာ
ကနေဒါသစ်ရွက် Fall ကြည့်ရှုပါရန် 10 အကောင်းဆုံးနေရာများ
နယူးအင်္ဂလန်၏အကောင်းဆုံး Spa မ်ား
ဇန်နဝါရီလအတွင်းက Universal Orlando တွင်သွားရောက်လည်ပတ်
အရှေ့ဥရောပမှခရီးသွားများအတွက်ထိပ်တန်းအကောင်းဆုံး Pack အလေ့အကျင့်
သည် Albuquerque Marigold Parade
အဘယ်အရာကိုများနှင့်အဘယ်မှာရှိ Kuching, မလေးရှားမှာရှိတဲ့စားရန်